Dameer Dameer Dhalay | allsanaag
Dameer Dameer Dhalay
Dameerkii Boqrka u noqday wasiirka Saadaasha hawada iyo meereeyayaasha
Beri baa waxa jiri jiray Boqor Hanti badan leh oo ka taliya degaan aad u baaxad weyn, Boqorkan ayaa jeclaa Ugaarsiga Duurjoogta ku noolayd Kaymihii uu ka talin jiray.
Boqorkan ayaa golihiisa wasiirada waxa ka mid aaa wasiir u qaabilsanaa saadaasha hawada iyo maareeyaaasha Xidigaha,
Boqorkani maalin walba uu Ugaarsi tegayo waxuu Su’aalo ku saabsan Hawadu sida ay tahay waydiin jiray wasiirkiisa u qaabilsan arimahaas.
Maalin walba sida Wasiirku Boqorka ugu sheego ayaa Allah ka dhigi jiray.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu waydiiyey wasiirkiisii sida ay hawadu noqon doonto maalmaha soo socda, Wasiirkii wuxuu ugu jawaabay saadaashu waa fiican thay ,Roob maynu sugayno, Kulayka cadceeda Qoraxduna maaha mid aad u kulul.
Boqrkii sidii buu ku baxay, isaga oo horay u sii qaatay qalabkii uu ku ugaarsan lahaa, wax yar markii uu socday Boqorku roob cirka iyo dhulka is qabsaday oo dabaylo wata ayaa ku dhuftay oo dul hooray, Iyaga oo daalaa dhacaya oo ka casi qaba inay naftooda waayaan ayeey ka dul dhaceen , nin Cariish yar ku jira oo ayna ka qasnayn oo uu Guriga hortiisa dameer ugu xidhan yahay.
Markii ay waydiiyeen sida uu ku ogaaday Duufaanadan dhacaya, ayuu u sheegay in Dameerkiisu u sheego arimaha ku saabsan hawada
“Hadii Dameerkaygu dhegaha kor u taago hawadu waa fiican tahay, haddiise uu hoos u dhgo waa xun tahay.
Boqorkii , oo aad u dhaxamoonaya oo qarqaraya. soona rafaaday, kana xun sida wasiirkiisii beenta ugu sheegay ayaa Ninkii Miskiinka ahaa inta uu isu seegay Qofka uu yahay lacag fiicana u sheegay ku yidhi Dameerka iga gad, Miskiinkiina waa yeelay.
Boqorkii Saldanadiisii ayuu ku soo laabatay isaga oo dameerkii wada, isla markii wuxuu shaqadii ka eryey wasiirkii Hawada, Wuxuuna wasiirka Hawada u magcaabay Dameerkii.
Maalintii xigtay isaga oo golihiisa wasiirada iyo Damaeerkii is baraya a ayuu ku yidhi ” Dameerani waa wasiirka Hawada, waa in lalal shaqeeyaa waana Dameer Dameer Dhalay.
Hadda Bulshada reer Puntland ayaa is waydiinaya in golaha Wasiirada ee soo socda lagu arki doonio Wax matare wax ma tare dhalay oo ka mid ah golaha wasiirada
← Bililiqada gobolka Sanaag BAARLAMANKA PUNTLAND OO COD KU KALA SAARAY XUBNO LAGU HESHIIN WAAYAY. →